Shiinaha ayaa daaha ka rogay nashqadaynta billadaha Olombikada ee Beijing 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Shiinaha ayaa daaha ka rogay nashqadaynta billadaha Olombikada ee Beijing 2022
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • dhaqanka • Entertainment • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Shiinaha ayaa daaha ka rogay nashqadaynta billadaha Olombikada ee Beijing 2022.
Waxaa loogu magacdaray "Tongxin", oo macneheedu yahay "Si wadajir ah hal mid ah", biladaha waxaa ka kooban shan siddo oo isku dhafan oo muujinaya falsafada dhaqanka Shiinaha ee wada noolaanshaha u dhexeeya samada, dhulka iyo aadanaha.
Daah-furka billadaha ayaa lagu xusay 100-ka maalmood ee la tiriyay ciyaaraha.
Ka dib markii ay si guul leh u martigelisay Ciyaaraha Olombikada Xagaaga ee 2008, Beijing waxay dhowaan noqon doontaa magaaladii ugu horreysay ee soo bandhigta daabacaadaha xagaaga iyo jiilaalka ee ciyaaraha caalamiga ah.
Qabanqaabiyeyaasha Beijing 2022 ayaa hoosta ka xarriiqay caafimaadka iyo badbaadada ka qaybgalayaasha inay tahay mudnaanta koowaad.
In ka yar hal usbuuc ka dib ololkii Olombikada yimid Shiinaha ka dib markii lagu shiday Olympia hore, Giriiga, Beijing 2022 Nashqada billadaha Olombikada ayaa maanta daaha laga rogay.
Shiinahamagaalada caasimadda ah ayaa u dabaaldegtay 100-ka maalmood ee tirinta ilaa iyo Ciyaaraha Olombikada 2022 Talaadada oo leh taariikh kale oo u diyaar garoowga Beijing 2022 u gudub heerarkooda ugu dambeeya.
Waxaa loogu magacdaray "Tongxin", oo macneheedu yahay "Si wadajir ah hal mid ah", biladaha waxaa ka kooban shan siddo oo isku dhafan oo muujinaya falsafada dhaqanka Shiinaha ee wada noolaanshaha u dhexeeya samada, dhulka iyo aadanaha. Siddooyinku waxay sidoo kale astaan ​​​​u yihiin faraantiga Olombikada, oo lagu xardhay wareegga gudaha, iyo ruuxa Olombikada oo adduunka ku mideeya isboorti.
Naqshadeynta billadda waxa dhiirigelisay qayb ka mid ah jadeecada Shiinaha ee loo yaqaan "Bi", saxan jaad ah oo labanlaab ah oo dalool wareeg ah ku dhex yaal. Sida jaadka loogu maleeyo in uu yahay qurxin aad u qiimo badan oo qiimo badan ku leh dhaqanka soo jireenka ah ee Shiinaha, ayaa billaddani waxa ay marqaati u tahay sharafta iyo dadaalka aan joogsiga lahayn ee ciyaartooydu.
Iyada oo faafitaanka COVID-19 uu weli ka sii fidayo meelo badan oo adduunka ah, Beijing 2022 qabanqaabiyayaasha ayaa hoosta ka xarriiqay caafimaadka iyo badbaadada ka qaybgalayaasha oo ah mudnaanta koowaad.
Daabacaadyadii ugu horreeyay ee buugaagta ciyaarta ee Beijing 2022 ayaa la daabacay Isniintii, iyadoo siinaya tilmaamo ciyaartooyda iyo mas'uuliyiinta si loo hubiyo in Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka iyo Paralympic sanadka soo socda si badbaado leh loo gaarsiin karo inta lagu jiro aafo.
Labada buug ee ciyaaraha, mid loogu talagalay ciyaartooyda iyo saraakiisha kooxda, iyo mid loogu talagalay dhammaan daneeyayaasha kale, ayaa wax ka qabta tallaabooyinka muhiimka ah ee ka hortagga COVID-19, oo ay ku jiraan maaraynta xirmidda, tallaalka iyo baaritaanka.
Sidii hore loogu dhawaaqay, dhammaan kuwa si buuxda uga tallaalay COVID-19 uma baahna inay karantiil galaan 21 maalmood markay yimaadaan Shiinaha oo beddelkeeda geli kara "nidaamka maaraynta loop-xiran". Kuwa ku jira nidaamka maaraynta-loop-ka ayaa maalin walba laga tijaabin doonaa COVID-19.
Daabacaada labaad ee buugaagta ciyaarta waxa lagu wadaa in la daabici doono Diisambar.
Tan iyo Oktoobar 5, tartamo taxane ah oo caalami ah ayaa ka dhacay National Speed ​​Skating Oval iyo Capital Gymnasium ee ku yaal bartamaha magaalada Beijing, iyo Xarunta Sliding Center ee Yanqing si loo tijaabiyo hawlgallada sida samaynta barafka, waqtiga iyo gool dhalinta, xakamaynta COVID-19 , amniga iyo gaadiidka.
Ficilka bisha November ayaa arki doona kulan luge ah oo koobka aduunka ah oo ay ku xigto dhacdooyinka koobka aduunka ee barafka lagu dul fuulo iyo isgoysyada freeski, iyadoo dhacdooyinka koobka Continental ee boodboodka barafka iyo Nordic la isku daray la qorsheeyay December.
Waxaa lagu qiyaasaa in ku dhawaad ​​2,000 ciyaartoy oo dibada ah iyo shaqaalaha taageerada ay ku lug leeyihiin munaasabadaha tijaabada, taas oo u oggolaanaysa qabanqaabiyayaasha inay tijaabiyaan tas-hiilaadka iyo hawlgallada ka hor Beijing 2022.